Tenga Yohimbine 30% Yakanyanya Potency Yohimbe Bark Bvisa Poda - Kutakura Mahara & Hapana Mutero | WoopShop®
Yohimbine 30% Yakanyanya Potency Yohimbe Bark Bvisa Poda
$93.99 Regular price $95.99
ruvara 500g 250g 1000g
Yohimbine 30% Yakanyanya Potency Yohimbe Bark Bvisa Poda - 500g yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Kudya: Yohimbe Bark Bvisa Poda
Muenzaniso Nhamba: KLE028
Yohimbine Hydrochloride inoratidzirwa seyetsitsi uye mydriatic. Inogona kunge iine chiitiko se aphrodisiac. Kushaya simba (kusakwanisa kuve nekugadziriswa) Nzira iyo yohimbine inoshanda hainyatso kuzivikanwa. Izvo zvinofungidzirwa, zvakadaro, kushanda nekuwedzera kugadzirwa kwemuviri kwemamwe makemikari anobatsira kugadzira zvigadzirwa. Izvo hazvishande mune vese varume vasina simba.
Kudzivirira tsinga kubva pakuvhara.
Dzivirira chirwere chemwoyo.
Kukwidziridza manzwiro, kuderedza kushushikana uye kushushikana, uye kunobatsira kuvaka mhasuru.
Kurapa kwekushaya simba kwevanhurume kunyanya kune hukama nechirwere cheshuga
Mupakeji haritauri kuti i30% simba, kana kuisa iro dosi kana chiri chigadzirwa icho mumadosi epamusoro chinogona kuve nenjodzi
Kutumira kuGerman kwemwedzi miviri Asi muzinga kuburikidza nezvinhu zvetsika zvakanaka OK Kugutsikana kunotora nguva yakareba zvakadaro Maita basa ndafunga kuti haichazouya mwedzi miviri yekutakura Asi iri mushure mekunge Germany yasvika Chigadzirwa chakanaka Ndatenda